Tsy voahajan’ny FAT ny « Franchise Universitaire »! – MyDago.com aime Madagascar
Tsy voahajan’ny FAT ny « Franchise Universitaire »!
Tsangambaton’ny fahaleovantena !
Auteur Solo Razafy*Publié le 29 avril 2011 30 avril 2011 Catégories Politique
4 réflexions sur « Tsy voahajan’ny FAT ny « Franchise Universitaire »! »
30 avril 2011 à 1 h 40 min
aoka isika tsy hinohino foana!!!
miala tsiny aho fa izany « franchise universitaire » izany anie koa tsy ao amin’ny lalàna fa fahazarana izany hoe tsy « légal » fa « coutumier » koa mitandrema ihany.
i professeur Achille Mestre no nanazava an’io taminay!
Aza dia variana loatra maka tahaka sy manarakza ny any ivelany!!!
kotokely dit :
30 avril 2011 à 2 h 42 min
marina mihitsy ny voalazan-dRATEFY;io « franchise universiteire » io dia karazana lova tamin’ny andro fahagola;
by « Université » dia mpandova ny fiangonana ary taloha dia karazan’ny toerana tsy azo kasian’ny fanjakana ny fiangonana’ (refugio paccatorum)
fa rehefa nisaraka ny raharaham-pitondrana sy ny raharaham-pivzavahana (laïcité de L’Etat) dia tsy misy intsony izany « franchise izany;
1 mai 2011 à 6 h 10 min
Izany no nahatonga ahy hilaza fa tsy dia priorité ny fiarovana an’izany « franchise universitaire » izany !
Lalàm-panorenana aza vitan-dry domelina ny nanitsakitsak’azy ; fitondrana sy filoham-pirenena nofidian’ny vahoaka, nahongany niaraka tamin’ny miaramila sy paolisy ary zandary, koa izany ve no atao mahagaga ????
Amin’izao fahoriana mianjady amin’ny Firenena izao, na mpiasam-panjakàna na orin’asa tsotra, ary indrindra moa ireo mpianatra izay HOAVIN’NY TANINDRAZANA, dia tsy tokony hijery fotsiny na manampina maso akory aza, fa manana andraikitra goavana !
Na MPANOHANA NY MPANONGAM-PANJAKANA, na MPANOHITRA.
Rehefa mpanohitra, dia IZAY TSY ARA-DALANA REHETRA NO KIANINA, ARY TOKONY ASEHO NA ARAHINA AMIN’NY HETSIKA MAFONJA IZANY FANOERANA SY TSY FANKASITRAHANA IZANY !
1 mai 2011 à 7 h 26 min
Tsy manaja afa tsy ny fangalarana fahefana sy fanfagalarana ny harenam-pirenena sy ny harenam-bahoaka ireo FAT ireo. Mila hetsika mafy sy ny hery matanjaka hanalana an’ireo amin’ny fomba rehetra na inona izany na inona. Tokony hivonon amin’izany ny rehetra. EFA ELA LOATRA IZAY ROA TOANA NANDEFERANA IZAY;
Précédent Article précédent : Mpianatra ho mpitsabo : mihantsy ny FAT !
Suivant Article suivant : Sary : Mikatso Ankatso